စစ်ပွဲတွေ ပါဝါ နိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုတွေကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ် ရဲ့ ယမ်းအိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း နဲ့ ပန်ကာထိပ်ကဝတ်အူဖြစ် တဲ့ အစ္စရေး နဲ့ အမေရီကန်တို့ရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား.. - Pyit Time Htaung
Homepage / World News / စစ်ပွဲတွေ ပါဝါ နိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုတွေကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ် ရဲ့ ယမ်းအိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း နဲ့ ပန်ကာထိပ်ကဝတ်အူဖြစ် တဲ့ အစ္စရေး နဲ့ အမေရီကန်တို့ရဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား..
By Pyit TimePosted on October 27, 2020 October 27, 2020
ပါဝါနိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုများနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ ဟာ စစ်ပွဲတွေ ပါဝါအားပြိုင်မှုတွေကြောင့် မျက်မှောက်ခေတ် ရဲ့ တငယမ်းအိုးကြီး ပမာ တင်စားခံရတဲ့နေရာတစ်ခု လို့ဆိုရမှာပါ ။
စစ်အေးခေတ်( Cold War ) ကာလမှာ ဆိုရင် ဆိုဗီယက် နဲ့ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု တို့ဟာ မိမိတို့ရဲ့အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် တပည့်တွေကို အပြိုင်အဆိုင်မွေးမြူခဲ့ကြ တယ် ။
ပါဝါနိုငျငံရေး အားပွိုငျမှုမြားနှင့ျ အရှေ့အလယျပိုငျး
အီဂျစ်၊ အီရန်၊ ဆီးရီးယားတို့ဟာ ဆိုဗီယက် ရဲ့ ကျက်စားရာတွေဖြစ်ပြီး အစ္စရေး ဆော်ဒီ ဘာရိန်းတို့ ကိုတော့ အမေရီကန်က လွမ်းမိုးနိုးခဲ့ ပါ တယ် ။ ဒါပေမယ့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေ အဓိကဘုံရန်သူ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတာကတော့ အစ္စရေးနိုင်ငံသာဖြစ် ပါတယ်။
သူ့ကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုတဲ့နိုင်ငံ လိုလားတဲ့နိုင်ငံ ဆိုတာကလည်း ၁၉၈၀ကာလတွေ အထိ မရှိသလောက် ပါဘဲ။ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတွေ အထူးသဖြင့် အီရန်ကတော့ ပိုပြီးဆိုး ပါတယ်။ သမ္မတဟောင်း အာမက်ဒီနာဂျက်နဲ့ လက်ရှိခေါင်းဆောင်ကြီး အယာတိုလာခါမေနီတို့ ဆိုရင် အစ္စရေး ကို ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်ကတောင် ဖျောက်ပစ်မယ် လို့ လူသိရှင်ကြား ကြွေးကြော်နေတာပါ။
အစ္စရေးအပေါ်ထား တဲ့ အမေရီကန်မူဝါဒတွေနဲ့ အစ္စရေးတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းအာှုတွေကြောင့် သာ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတွေ မလှုပ်နိုင်ဘဲဖြစ်နေတာ ပါ။ အခုတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဟာ ဆွန်နီအုပ်စုတွင်း အားပြိုင်မှုတွေ အိုင်အိုစီအဖွဲ့ဝင်တွေအကြား ခေါင်းဆောင် အတွက် တွန်းတိုက်မှုတွေကြောင့် တင်းမာမှုတွေဟာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမှာ မကြုံစဖူးမြင့်တတ်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အခြေအနေ ကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနေသူတွေက အစ္စရေး နဲ့ အမေရီကန်တို့ပဲဖြစ် ပါတယ်။ အစ္စရေး ဟာ ၂၀၂၀နှောင်းပိုင်း မှာ ထရန့်ညှိနှိုင်းပေးမှုတွေနဲ့အတူ အာရပ်နိုင်ငံတွေနဲ့ သံတမန်ဆက်ဆံရေးတွေ ကို ထူထောင်လာနိုင်ပါပြီ။
ယူအေအီး၊ ဘာရိန်းတို့နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်း သံအဆက်အသွယ်ထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အစ္စရေးတွေဟာ မနေ့ကသောကြာနေ့(သြဂုတ်၂၃)ရက်မှာတော့ တတိယမြောက်အာရပ်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ သံအဆက်အသွယ် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ကြေညာ ပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံကတော့ ဆူဒန်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတစ်ရက် မတိုင်ခင်မှာပဲ ထရန့်က ဆူဒန်ကို အကြမ်းဖက်နိုင်ငံ စာရင်းသွင်းထားတာကနေ ပယ်ဖျတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဆူဒန်ကတော့ သူတို့ကို အခုလိုအကြမ်းဖက်နိုင်ငံများစာရင်းကနေ ပယ်ဖျတ်ပေးမှု အတွက် အမေရီကန်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြော ဆိုပါတယ်။
ဆော်ဒီ၊ တူရကီ၊ အီရန်၊ ပါကစ္စတန် တို့ရဲ့ အချင်းချင်းအားပြိုင်မှုတွေကြား မှာ အစ္စရေးဟာ အားကိုးရာတစ်ခုဖြစ်နေမလား? ပန်ကာထိပ်ကဝတ်အူဖြစ် တဲ့ အစ္စရေး နဲ့ အမေရီကန်တို့ကရော ဘယ်လိုမူဝါဒတွေကိုသုံးပြီး အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား ကို ဖော်ဆောင်သွားမလည်း ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီလို့ ဆိုရတော့မှာဖြစ် ပါတယ်။
ပါဝါနိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ဟာ စစ္ပြဲေတြ ပါဝါအားၿပိဳင္မႈေတြေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ရဲ႕ တငယမ္းအိုးႀကီး ပမာ တင္စားခံရတဲ့ေနရာတစ္ခု လို႔ဆိုရမွာပါ ။
စစ္ေအးေခတ္( Cold War ) ကာလမွာ ဆိုရင္ ဆိုဗီယက္ နဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႔ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားေတြနဲ႕ ကိုက္ညီမယ့္ တပည့္ေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္ေမြးျမဴခဲ့ၾက တယ္ ။
ပါဝါနိုင်ငံေရး အားပြိုင်မႈျမားႏွင့် အေရွ႕အလယ်ပိဳင်း
အီဂ်စ္၊ အီရန္၊ ဆီးရီးယားတို႔ဟာ ဆိုဗီယက္ ရဲ႕ က်က္စားရာေတြျဖစ္ၿပီး အစၥေရး ေဆာ္ဒီ ဘာရိန္းတို႔ ကိုေတာ့ အေမရီကန္က လြမ္းမိုးနိုးခဲ့ ပါ တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနိုင္ငံေတြ အဓိကဘုံရန္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရတာကေတာ့ အစၥေရးနိုင္ငံသာျဖစ္ ပါတယ္။
သူ႕ကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့နိုင္ငံ လိုလားတဲ့နိုင္ငံ ဆိုတာကလည္း ၁၉၈၀ကာလေတြ အထိ မရွိသေလာက္ ပါဘဲ။ အစၥလာမ္မစ္နိုင္ငံေတြ အထူးသျဖင့္ အီရန္ကေတာ့ ပိုၿပီးဆိုး ပါတယ္။ သမၼတေဟာင္း အာမက္ဒီနာဂ်က္နဲ႕ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ႀကီး အယာတိုလာခါေမနီတို႔ ဆိုရင္ အစၥေရး ကို ကမာၻ႔ေျမပုံေပၚကေတာင္ ေဖ်ာက္ပစ္မယ္ လို႔ လူသိရွင္ၾကား ေႂကြးေၾကာ္ေနတာပါ။
အစၥေရးအေပၚထား တဲ့ အေမရီကန္မူဝါဒေတြနဲ႕ အစၥေရးတို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္နိုင္စြမ္းအာႈေတြေၾကာင့္ သာ အစၥလာမ္မစ္နိုင္ငံေတြ မလႈပ္နိုင္ဘဲျဖစ္ေနတာ ပါ။ အခုေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသဟာ ဆြန္နီအုပ္စုတြင္း အားၿပိဳင္မႈေတြ အိုင္အိုစီအဖြဲ႕ဝင္ေတြအၾကား ေခါင္းေဆာင္ အတြက္ တြန္းတိုက္မႈေတြေၾကာင့္ တင္းမာမႈေတြဟာ ေဒသတြင္းနိုင္ငံေတြအၾကားမွာ မႀကဳံစဖူးျမင့္တတ္လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါ အေျခအေန ကို အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ေနသူေတြက အစၥေရး နဲ႕ အေမရီကန္တို႔ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ အစၥေရး ဟာ ၂၀၂၀ေႏွာင္းပိုင္း မွာ ထရန႔္ညွိႏွိုင္းေပးမႈေတြနဲ႕အတူ အာရပ္နိုင္ငံေတြနဲ႕ သံတမန္ဆက္ဆံေရးေတြ ကို ထူေထာင္လာနိုင္ပါၿပီ။
ယူေအအီး၊ ဘာရိန္းတို႔နဲ႕ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္လအတြင္း သံအဆက္အသြယ္ထူေထာင္နိုင္ခဲ့တဲ့ အစၥေရးေတြဟာ မေန႕ကေသာၾကာေန႕(ၾသဂုတ္၂၃)ရက္မွာေတာ့ တတိယေျမာက္အာရပ္နိုင္ငံတစ္ခုနဲ႕ သံအဆက္အသြယ္ ထူေထာင္နိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ ေၾကညာ ပါတယ္။ အဲဒီနိုင္ငံကေတာ့ ဆူဒန္နိုင္ငံပဲျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီတစ္ရက္ မတိုင္ခင္မွာပဲ ထရန႔္က ဆူဒန္ကို အၾကမ္းဖက္နိုင္ငံ စာရင္းသြင္းထားတာကေန ပယ္ဖ်တ္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ဆူဒန္ကေတာ့ သူတို႔ကို အခုလိုအၾကမ္းဖက္နိုင္ငံမ်ားစာရင္းကေန ပယ္ဖ်တ္ေပးမႈ အတြက္ အေမရီကန္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာ ဆိုပါတယ္။
ေဆာ္ဒီ၊ တူရကီ၊ အီရန္၊ ပါကစၥတန္ တို႔ရဲ႕ အခ်င္းခ်င္းအားၿပိဳင္မႈေတြၾကား မွာ အစၥေရးဟာ အားကိုးရာတစ္ခုျဖစ္ေနမလား? ပန္ကာထိပ္ကဝတ္အူျဖစ္ တဲ့ အစၥေရး နဲ႕ အေမရီကန္တို႔ကေရာ ဘယ္လိုမူဝါဒေတြကိုသုံးၿပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမလည္း ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေနၿပီလို႔ ဆိုရေတာ့မွာျဖစ္ ပါတယ္။
Posted in World NewsTagged စစ်အေးခေတ်( Cold War ), ဆိုဗီယက်, ဆူဒန်, အစ္စရေး, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံ
Previous post ရွေးကောက်ပွဲ အကြို နောက်ဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ဒေါ်နယ်ထရမ့် နဲ့ ဂျိုးဘိုင်ဒင်တို့ ဘယ်လိုတွေ စကားစစ်ထိုး လိုက်သလဲ …
Next post SKYNET မရှိသူများ ဖုန်းဖြင့် အောင်လ ပွဲ ကြည့်ချင်သူများ အတွက် အများသိအောင် မျှဝေပေး လိုက်ကြ ပါ ဦး ဗျာ